Axmed Maoobe oo shaaciyay magacyo muddo laga sugayay | KEYDMEDIA ONLINE
Axmed Maoobe oo shaaciyay magacyo muddo laga sugayay
Madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe, ayaa shaaciyay magacyada musharaxiinta afarta kursi ee ka dhiman Aqalka sare ee BJFS, ee degaan doorashadoodu tahay Kismaayo.
KISMAAYO, Soomaaliya - Madaxweynaha maamulka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam, ‘Madoobe’ ayaa soo saaray liiska musharrixiinta u tartamaya afar kursi oo ka tirsan Aqalka sare ee BFS, oo baaqi ku ahaa Kismaayo.
Jubbaland ayaa noqotay maamulkii ugu horreyay ee daah-fura doorashooyinka dalka, kadib marun siyaasadeed oo muddo soo socday, hayeeshee, tan iyo 29 July 2021, Maamulka Madoobe, waxaa laga sugayay dhameystirka doorashada Aqalka sare.
Siddeed musharrax ayaa ku loollami doona afarta kursi, kuwaas oo shan ka mid ah ay yihiin haween, tartanka labo kuri waxaa loo gooni yeelay dumar, halka Farxiya Macalin Cabdi, tartan la gali doonto Ibrahim Awgaab Cismaan.
“Anigoo tixraacaya Dastuurka JFS, Qodobkiisa 71aad Heshiiska 17-kii September 2020 ee hannaanka doorashooyinka 2020/2021 iyo war-murtiyeedyadii shirkii Golaha Wadatashiga Qaran ee 27 May/2021 iyo 29 June/2021, waxaan halkan idiin ku soo gudbinayaa liiska musharraxiinta kuraasta dhimaneyd ee Aqalka sare ee BJFS”. Ayaa lagu yiri war ka soo baxay xaafiiska MW Jubbaland.
Kuraasta 5-aad, 6-aad 7-aad iyo 8-aad ayaa loogu loollami doonaa sida soo socta;
K5ASBFS - Layla Nuux Maax iyo Xareedo Maxamed Sheekh
K6ASBFS - Ibrahim Awgaab Cismaan iyo Farxiya Macalin Cabdi
KZASBFS - Maryan Faarax Kadiye iyo Samsam Maxamed Bishaar
KSASBFS - Xasan Daahir Yarow iyo Cali Maxamed Cali.
Axmed Madoobe, ayaa hore saaxiibadiisa kala ah; Senetar Ilyaas Badal Gaboose, Senetar Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil ‘Fartaag’, Senetar Cabdirisaaq Maxamed Cusmaan iyo Senetar Iftiin Xasan Iimaan Baasto, u suura galiyay in ay si fudud u soo baxaan, hayeeshee, baratamaayasha uu hadda soo gudbiyay ayaa adag tahay in la saadaaliyo cidda soo baxaysa.
Jubbaland, ayaa ka mid ahayd, caqabadihii muddada ku hor gudbanaaa doorashooyinka dalka, inkasta oo wali tabasho laga soo sheegayo gobolka Gedo, hadana waxaa xaaladda uga sii dari karta abaarta xooggan ee ku dhufatay gobollada maamulkaas, taas oo la filayo in ay dib u dhigto doorashada Golaha shacabka.
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye ‘Qoorqoor’ ayaa ah MW kaliya ee ilaa hadda aan soo dhameystirin musharixiinta Aqalka sare, waxaana laga sugayaa inuu soo saro magacyada baratamyaasha labada kursi ee baaqiga ka ah kuraasta Aqalka sare ee Galmudug.